Iindaba -Iyona microscope yethu enkulu ye-30000+ ukuya e-Bangladesh kwi-2019
I-oda yethu enkulu ye-30000+ microscope ukuya e-Bangladesh ngo-2019
Kwi-2018, umthengi wethu wase-Bangladesh usixelele ukuba bazokuzimasa ithenda kaRhulumente, ngaphezulu kwe-30000 + microscopes, enamaxwebhu asemthethweni ethenda. Ithenda ijolise ekuboneleleni ngemicroscope yabafundi kwizikolo ezingaphezu kwe-10000 + kwilizwe laseBangladesh, yenza ukuba abafundi kwizikolo zamabanga aphantsi naphakathi baqalise isifundo sabo senzululwazi ngezixhobo ezomeleleyo.
Emva kothethathethwano ngaphezulu konyaka omnye, ngo-2019-03 sifumene iindaba ezimnandi ekugqibeleni-saphumelela ithenda yee-20000 iiPC A11.1506-A1 kunye ne-10000 pcs A11.1522-D! I-Opto-Edu kufuneka ihambise zonke iimpahla zingaphelanga iinyanga ezi-6, ihlawulwe ngokupheleleyo nge-100% ye-LC, imali iyonke ngaphezulu kwe-19.5 yezigidi zeedola zaseMelika. Lo ngumyalelo OBALULEKILE kwimbali kaOpto-Edu, mhlawumbi iodolo enkulu kunazo zonke kwimakethi yase China yokuthengisa ngaphandle!
Emva kokuba uLC efumene kwaye eqinisekisile, imveliso yeOpto-Edu yokuqala imveliso ngokukhawuleza. I-odolo yahlulwe yathunyelwa nge-6, nganye iqulethe iiyunithi ezingama-3000 ukuya kuma-6000, zifuna i-3-10x 20 'FCL. Umthengi ulungiselele inkampani yabo yokuhlola ukuba ifektri ijonge zonke iimpahla ngaphambi kokuziswa, apho abantu bakaOpto-Edu bahlala khona ukuze balandele imveliso kunye nohlolo nabo.
Kwi-2019-09, iOpto-Edu ithumele ngempumelelo iimpahla zebhetshi zokugqibela, kwaye yathumela onke amaxwebhu afunwa yi-LC ukuvula ibhanki ngexesha. Sifumene intlawulo epheleleyo ye-odolo kamva kwi-2019-10, kunye nengxelo yokugqibela yomgangatho evela kumthengi, yatsho ukuba zonke ii-microscopes ze-Opto-Edu zisiwe ezikolweni kulo lonke elase-Bangladesh, uviwo luphumelele umgangatho. I-Opto-Edu iya kubonelela ngeminyaka emi-3 iwaranti esemgangathweni kwezi microscopes, ukuqinisekisa abathengi kunye nomsebenzisi wokugqibela ukuba basebenzise iimicroscopes zethu ngaphandle kokukhathazeka.
Ngethemba, uOpto-Edu uzakuba namathuba amaninzi okuphumelela iithenda ezininzi kwiimarike zaseBangladesh kwikamva!
Njengomnye wabanikezeli bobuchwephesha kwicandelo lemicroscope e-China, sineemodeli ezingaphezu kwe-1500 kuluhlu lwethu lokubonelela, kwisicelo ngasinye kunye nemfuneko, sinokukhetha kwaye sincome i-microscope eyi-1-3 esemgangathweni evela kwimakethi yaseChina kubathengi bethu. Siyakuqinisekisa ukuba uyakufumana eyona microscope EBONELELWEYO YOKUKHETHA iimfuno zakho!
Ixabiso ngqo mveliso!
Iwaranti esemgangathweni yeminyaka emi-3!
Intlawulo nge-T / T, PayPal, West Union ukuya kwi-LC! - +
Kubekwe umthengisi wenombolo 1 kwimicroscope kwi-alibaba.com!
Zonke iintlobo zemicroscope ezenziwe e-China zifumaneka apha!
Inkxaso eyomeleleyo yokuba ngumhambisi we-OPTO-EDU kwintengiso yakho!
Ukuba unemibuzo engaphezulu, rhuma umyalezo kuthi ngoku, siya kunxibelelana ngaphakathi kweeyure ezingama-24!